Ahoana ny fomba hamoronana kalandrie marketing amin'ny haino aman-jery sosialy | Martech Zone
Ahoana ny fomba hamoronana tetiandro marketing amin'ny haino aman-jery sosialy
Alahady, Aogositra 2, 2015 Asabotsy, Aogositra 1, 2015 Douglas Karr
74% ny mpivarotra nahita an fitomboan'ny fifamoivoizana rehefa avy nandany 6 ora isan-kerinandro fotsiny tao amin'ny media sosialy ary ny 78% -n'ny mpanjifa amerikana dia nanambara fa ny media sosialy misy fiantraikany amin'ny fanapaha-kevitr'izy ireo. Araka ny lazain'i Quicksprout, ny famolavolana tetiandro amin'ny haino aman-jery sosialy dia hanampy amin'ny fifantohana ny paikadin'ny media sosialy, hizara loharano mahomby kokoa, hanampy anao hamoaka tsy tapaka, ary handamina ny fomba fitehirizana sy famoronana atiny.
Ny kalandrie media sosialy dia afaka manampy anao hampiroborobo hatrany ny atiny avo lenta, mampihena ny fotoana laninao, ary mandrindra sy mifehy ny atiny. Zahao ny infographic an'ny Quicksprout, Maninona ianao no mila kalandrie media sosialy sy ny fomba famoronana iray, raha mila tsipiriany misimisy kokoa momba ny antony ilanao kalandrie media sosialy sy ny paikady hanaovana izany.
Mpankafy lehibe izahayHootsuite ary ny fahaizana mandahatra fanavaozana ara-tsosialy amin'ny alàlan'ny fampakaram-be ary jereo ny varotra media sosialinay amin'ny alàlan'ny fijerin'ny kalandrie:
Afaka maka môdely kalandrie haino aman-jery sosialy ary maodely fampakaram-bola betsaka mivantana avy amin'nyHootsuite bilaogin'i. Manoro hevitra ny fanavaozana ny haino aman-jery sosialy izahay tsirairay avy:
Iza - Kaonty iza na kaonty manokana no tompon'andraikitra amin'ny famoahana ny fanavaozana ara-tsosialy ary iza no tompon'andraikitra amin'ny famaliana ny fangatahana rehetra?
Inona - Inona no hosoratanao na hozarainao? Tadidio fa ny sary sy ny horonan-tsary dia hanampy amin'ny fifampiraharahana sy fizarana. Efa nandinika tenifototra ve ianao mba hampidirana anao hahita mpihaino misimisy kokoa sy mifandraika kokoa?
Aiza - Aiza ianao no mizara ny fanavaozana ary ahoana no hanatsaranao ny fanavaozana ny fantsona izay amboarinao?
Rehefa - Rahoviana ianao no hanavao? Ho an'ny paositra atosiky ny hetsika, manisa ny fotoana andehananao amin'ilay hetsika ve ianao? Ho an'ny fanavaozana lehibe, averinao ve ny fanavaozana mba hahitan'ny mpihaino anao azy ireo raha tsy mahita fanavaozana voalohany izy ireo? Moa ve ianao manana hetsika bisikileta toy ny fialantsasatra na fihaonambe izay ilainao hamoaka aloha, mandritra ary aorian'ny?
Nahoana - matetika tsy tratra, maninona ianao no mandefa an'ity fanavaozana ara-tsosialy ity? Ny fiantohana anao mieritreritra ny antony hanampiany anao hitadidy ny fiantsoana andraikitra tadiavinao ny mpankafy na ny mpanaraka anao ary koa ny fomba handrefesanao ny fahombiazan'ny famoahana sosialy.
Ahoana - paikady lehibe iray hafa tsy tratranao… ahoana no hampiroboroboanao ny fanavaozana? Manana programa mpiaro ny zon'ny mpiasa na ny mpanjifa ve ianao? Manana teti-bola amin'ny fanaovana doka ny lahatsoratra amin'ny fantsona sosialy izay sivana matetika (toa ny Facebook) ny fanavaozana ny fiaraha-monina?
Tags: kalandriekalandrie fanoratanakalandrie sosialykalandrie media sosialykalandrie marketing amin'ny media sosialy
Horonan-tsary 7 tokony hamokaranao hampitomboana ny valin'ny marketing
Aug 5, 2015 amin'ny 8: 43 AM
Lahatsoratra tsara! Vao nanomboka nampiasa Twitter aho, ka tsy maintsy mieritreritra ny sasany amin'ireto toro-hevitra ireto hanampy amin'ny fampiroboroboana ny bilaogiko! Misaotra.